Ny fomba fijery izao amin'ny Phuket ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Ny fomba fijery izao amin'ny phuket
Zava-misy fijery izao, Phuket
Sombin-kevitra momba ny Doka Ankavanan'ny Karon any Phuket Vidin-javatra.
Dekasa fanaraha-maso izao amin'ny sari-tany. Ahoana no hahatongavana any.
Saripika sy horonan-tsary avy amin'ny kianja fandanjalanjana Karon
Hevitra ao amin'ny Karon Phuket Lookout Pad (valin'ny Google)
Ny tsikaritra momba ny tranokala malalaky Karon any Phuket (Tripadvisor.ru)
Lookout Karon (point de jour) Overview
Io tranonkala io dia antsoina koa indraindray Kata ary nasiana marika amin'ny sarintany maro amin'ity anarana ity, satria tsy lavitra izany Teny Noi Beachraha mankany amoron-dranomasina Karon manomboka eto ihany, na dia hita mibaribary mazava aza amin'ity tranokala ity.
Ny foza fitsikilovana dia manome fomba fijery mahavariana amin'ny tora-pasika telo indray mandeha: Kata noi, Kata и Karon. Toerana tsara ho an'ny sary mpifankatia. Manodidina ny tranokala dia misy izay rehetra ilainao: fiantsenana, fivarotana, kafe, trano fidiovana.
Maro ny mpizahatany tonga eto hitsena ny masoandro, satria avy amin'ity ilany Phuket ity dia milentika ny faravodilanitra. Mbola hita maso eto Sarivongana Big Buddha.
Amin'ny ankapobeny, ny kianja fandanjalanjana Karon dia sehatra vita amin'ny fitaovana, misy ny toerana malalaka ary misy valanjotra ahafahanao mipetraka.
Misy koa ny toeram-pisakafoanana eo akaiky eo, ao anatin'izany ny Rosiana iray, tena akaiky ilay tranokala ary hita taratra ihany koa ny masoandro mody!
Ny fitsidihana mahaleo tena dia atolotra na amin'ny maraina na amin'ny hariva, satria mandritra ny andro dia manangona ny tranokalan'ny fiara fitateram-bahoaka ny tranokala, ary lasa toy ny kianjan'ny tsena izay tsy ahafahanao mifangaro olona.
Indrindra be dia be, ny fiara fitateram-bahoaka manontolo no tonga eto amin'ny solontenan'ny tolakandro tsy hay hadinoina 🙂
Eny, araka izany, manoro hevitra izahay hitsidika azy io ho anao manokana, fa tsy ampahany amin'ny fitsidihana.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia manoro hevitra ny hametraka adiny iray izahay hahazoana sary tsara.
Raha liana amin'ny tara-masoandro ianao, dia eo ho eo ny manodidina an'io taona io enina amin'ny hariva.
for 10 baht dia azo jerena ao amin'ny panam-baravarana fisokafana miaraka amina sakelidalana.
Aiza sy ny fomba hahatongavana any
Ny làlam-pandrefesana Karon dia hita eo akaikin'ny arabe lehibe 4233 akaikin'ny morontsirak'i Nai Harn sy Teny Noi eo amin'ny havoana. Ny haavony dia 190 m.
Avy amin'ny lalana 4233 ity havoana ity dia hita tsara, tsy azo atao ny mijery azy.
Afaka tonga eto ianao amin'ny alàka-tuk, amin'ny fiara / bisikileta manofa na amin'ny taxi.
Fifandraisana, adiresy, tondro amin'ny sarintany
Address: 4233 Karon, Distrikan'i Mueang Phuket, Phuket 83100, Thailand
Fomba fiasa - manodidina ny famantaranandro
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/eAesaymaDLxucifh6
Mijery todika amin'ny sari-tany
Lookout Karon (point view view), Phuket. Sary sy horonan-tsary
Ny hevitra momba ny fijery Karon (valin'ny Google)
Ny hevitra momba ny fijery Karon (TripAdvisor.com)
Mahafinaritra ny fijery. Mampalahelo fa ny satrobon'ireo hazo dia mametra be azy io, saingy tsara tarehy anefa ny panorama.
Amin'ny tolakandro ihany dia tsara kokoa tsy ho tonga. Indrindra amin'ny vanim-potoana ambony. Ireo sinoa dia misy onjan-drano fotsiny. Na izany aza, mpizahatany.
Fa nony maraina dia misy tokoa ny afo! Rehefa hariva dia misy olona vitsy kokoa noho ny tolakandro, fa tsy kely, satria tonga hankafy ny masoandro.
Amin'izany fomba izany, misy trano fisakafoanana any an-danitra eo akaiky, izay manomboka ny fiposahan'ny masoandro dia tsara tarehy kokoa. Ary azo antoka fa tsara kokoa kokoa ny mijery azy.